हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको सुनको मूल्य !! | समाचार
हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको सुनको मूल्य !!
June 28, 2021 June 28, 2021 NepstokLeaveaComment on हेर्नुहोस् यस्तो छ आजको सुनको मूल्य !!
सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ । आइतबार तोलामा २ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज स्थिर रहेको हो । आइतबार प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज स्थिर रही सोही मूल्यमा नै कायम रहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ९० हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।त्यस्तै आज चाँदीको मूल्यपनि स्थिर रही तोलाको १ हजार ३ सय ५ रुपैयामा नै कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
थप समाचार :खाली पेटमा भुलेर पनि नखानुस् यी ७ खानेकुरा, नत्र ज्या,नै जान सक्छ हामीले बाँच्नको लागी विभिन्न किसिमका खानेकुराहरु खाने गदछौ । तीमध्ये केही खानेकुरा स्वास्थ्यको लागी फाइदाजनक हुन्छ भने केही खानेकुराले स्वास्थ्यलाई नकरात्मक असर समेत गर्छ।
त्यसैले हामीले खानेकुरालाई समय मिलाएर सन्तुलित भोजन खानुपर्दछ। आज हामी तपाईहरुलाई खाली पेटमा विर्सेर पनि खानु नहुने खानेकुराको बारेमा कुरा गदै छौँ । हेर्नुस् के के हुन् ?खाली पेटमा केरा भुलेर पनि खानु हुदैन् । तर केही खानेकुरा खाएर खायो भने चाही फाइदाजनक हुन्छ। यदि खाली पेटमा अमिलो फलफुलहरु कागती र सुन्तलाजस्ता खानेकुरा खाएमा पनि नकरात्मक असर पर्दछ।
खाली पेटमा दही पनि खानु हुदैन् । तर केही खानेकुरा खाएपछि खायो भने दहीमा पाइने क्याल्सियम र प्रोटिनले फाइदा गर्छ।त्यस्तै खाली पेटमा टमाटर पनि खानु हुदैन्। विचार गर्नुस् , खाली पेटमा चिया कफी पनि खानु हुदैन्। पिरो तथा मसलेदार खानेकुरा पनि सेवन गर्नुहुदैन्। जस्तोसुकै स्वास्थ्य समस्या भएको बिरामीले पनि खाली पेटमा औषधी खानु हुदैन्।
काेराे-ना भा- ईरस ( काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ अनिबार्य रुप मा माक्स को प्रयोग गरौं साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ सल्लाह सुझाव को लागि हामिलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।। तपाइको एक सेयरले थाहा नपाएकाले जानकारी पाउनेछन भने हामीलाई पनि सहयोग पुग्नेछ